Dood madaxeedkii Soomaaliya oo fashilantay kadib markii musharixiintu diideen in ay ka qaybgalaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDood madaxeedkii Soomaaliya oo fashilantay kadib markii musharixiintu diideen in ay ka qaybgalaan
January 31, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Dood madaxeedkii Soomaaliya oo fashilantay kadib markii musharixiintu diideen in ay ka qaybgalaan. [Graphic: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa diiday in ay ka qaybgalaan dooda madaxweynaha, taasoo la qorsheeyay in maanta oo Talaado ah lagu qabto gudaha Muqdisho.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegayaan, dooda ayaa fashilantay kadib markii loo doortay in uu dhex-dhexaadiyo taleefishinka dowladda ee SNTV.
Ilaa iyo 24 musharixiin madaxweyne ah oo uu kamidyahay madaxweynaha hadda xafiiska jooga ayaa la filayay in ay ka qaybgalaan dooda.
Dowladda ayaa u diiday warbaahinta madaxa-banaan in ay ka qaybgasho dooda, taasoo keentay in musharixiintu ay ka baxaan dooda, sida ay xaqiijinayaan wararku.
Dadka Soomaaliyeed ayaa ka rajo qabay in ay daawadaan doodii kowaad oo madaxweyne, balse nasiib-daro waa dhicisowday.